Game of Warriors 1.1.37 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.37 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Game of Warriors
Game of Warriors ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စစ်သည်များ၏ဂိမ်းက၎င်း၏အမျိုးအစားထဲမှာထူးခြားတဲ့စတိုင်နဲ့မဟာဗျူဟာ TD (မျှော်စင်ကာကွယ်ရေး) ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးမှော်ကမ်ဘာပျေါတှငျ Set သူတို့ကိုသင်အောင်နိုင်မှရန်သူနယ်မြေရှင်သန်နှင့်ဝိုင်းရံဖို့သင့်ကာကွယ်ရေးနှင့်အားကြီးသောစစ်သားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရပါလိမ့်မယ်။
မကောင်းသောအနိုင်ငံတို့၏ပြိုင်ဘက်မဟာမိတ်အထီးကျန်နှင့်မေ့လျော့ခြင်း, ကမ္ဘာ၏တစ်ထောင့်ဖို့လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အဘယ်အရာကိုအကြွင်းအကျန်တွန်းထားပါတယ်, စိတ်ဆင်းရဲမှုသို့ထိုးခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းစွာရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားနေ။
အဆင်သင့်မြင်း, သင့်သူရဲငှားရမ်းခြင်းနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါလှံတို့ကို ပြင်ဆင်. , စစ်ဦးချိုနောက်တဖန်အသံပါလိမ့်မယ်, ငါတို့ဖို့အတွက် Titans တွေကရန်သူနံရံများနှင့်တာဝါတိုင်ဖျက်ဆီးမည်။
မှောင်မိုက်အင်ပါယာ၏အသက်အရွယ်အဆုံးသတ်မှလာကြပြီ, ကကွက်တိကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောအရာကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အချိန်ရဲ့ကပုန်ကန်, စစ်ပွဲနှင့်လက်စားချေဘို့အချိန်ပဲ!
သူရဲ၏ဤမော်ကွန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ထာဘုန်းအသရေဘို့အစစ်တိုက်ပွဲသို့သင့်ရဲ့ gladiator ဆင့်ဆိုလော့။
- မျှော်စင်ကာကွယ်ရေး (TD) နှင့်မဟာဗျူဟာဂိမ်းစတိုင်။
- +1500 ခုခံကာကွယ်လှိုင်းတံပိုး။
- သော့ဖွင့်ဖို့4သူရဲကောင်းများ။
- အောငျနိုငျဖို့ +100 နယ်မြေများ။
- +30 စစ်သားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
- +1000 အဆောက်အဦအဆင့်မြှင့်။
- အောင်နိုင်မှ4ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး (မှင်စာ, အရိုးစု, Worgens နှင့် Orcs) ။
- 15 passive နှင့်သင့်ယေဘုယျ3တက်ကြွကျွမ်းကျင်မှု။
Game of Warriors အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Game of Warriors အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Game of Warriors အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Game of Warriors အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.53k 5.94M
Game of Warriors ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Game of Warriors အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.37
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://play365.io/GOW/privacy-policy/
App Name: Game of Warriors
Release date: 2019-06-14 18:10:34
လက်မှတ် SHA1: 6A:D0:DA:BA:5C:37:E3:CB:9D:94:E2:87:F3:3B:62:30:84:28:58:83
အဖွဲ့အစည်း (O): BoxItSoft
Game of Warriors APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ